Ogow cabbirada adaabtaradaada bong-gaaga| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Blog -ka Dragons -ka → Ogow cabbirka adabtaradaada ee bong -kaaga
Ogow xajmigaaga wadajirka/isku xiraha
Cabbirka wadaagga ee ugu badan waa 10mm, 14mm iyo 18mm isku xirka dumarka. Bong -yada yaryar waxay u muuqdaan inay isticmaalaan 10mm ama 14mm kala -goysyada kuwa waaweynna waxay u muuqdaan inay adeegsadaan 18mm, laakiin tani had iyo jeer ma aha kiiska. Bong -yada waaweyn qaarkood ayaa wali isticmaala 14mm kala -goysyada iyo dhanka kale.
Degdeg ah, fudud oo kharash-ku-ool ah si aad u isticmaasho gubiddaada ama uumigaaga hadda jira waa adabtarada galaaska oo aad u hooseysa oo kuu oggolaanaysa inaad ku isticmaasho isku-darka labka 10mm ee isku-darka dheddig 14mm ah ama isku-darka lab ee 14mm ee ku jira 18mm isku-darka dheddig:
Qalabka dab -damiska qaarkood waxay leeyihiin 10mm, 14mm ama 18mm isku xirnaanta ragga. Waxaad isticmaali kartaa adabtarada ku habboon lab iyo dheddig labadoodaba:
Nasiib wanaag, badiyayaasha biibiileyaasha biyaha badankoodu waxay leeyihiin nashqad la duubay taas oo ka dhigaysa inay la jaanqaadaan cabbirka wadaagga ee caadiga ah. Had iyo jeer hubso in bong -gaagu uu ku hayo shaabadda hawo -mareenka aaladdaada si loo helo waxqabadka ugu wanaagsan
Hi Mel, nasiib darro, soo -saarayaashu ma sameeyaan cabbirradaas
Miyaad sameysaa haweeney 10mm ah ilaa 10mm adabtarada lab ama 14mm ilaa 10mm dheddig lab ah?